Francisca Aguirre anofa. 4 nhetembo dzeyeuko yako | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo wekutanga: (c) La Razón.
Nyanduri waAlicante Francesca Aguirre, anozivikanwa zviri nani saPaca Aguirre, akafa kuMadrid aine makore 88 makore. Kuva kune izvo zvinonzi «chimwe chizvarwa chema50s», Aive mumwe wevanyori vashoma vaive vachiri vanoshanda. Symbolism, kudzika, kudzika asiwo kupemberera kwehupenyu, kuswedera pedyo, kushuva uye rudo ivo vanogadzira basa rekupedzisira kucherechedzwa, asi rakakodzera iro nekodzero dzakazara. Izvi ndizvo 4 yenhetembo dzake izvo zvandinosimbisa.
2.2 Chando chekupedzisira
2.3 Chapupu chekusiiwa
2.4 Nguva yakareba
Aive mwanasikana wemupendi Lorenzo Aguirre chinobata mufananidzo uye akange akaroora Felix Grande, mumwe mudetembi akakosha, vaaive navo mwanasikana nyanduri, Guadalupe Grande.
Zvakatora nguva yakareba kuburitsa uye yaifungidzirwa zvakanyanya kufuridzirwa naAntonio Machado maererano nemaitiro ezvinyorwa zvinyorwa, izvo zvinofanirwa kunge zviri kuratidzira kwekuvapo kwako kudarika iro basa rekugadzira. Iyo Machado pesvedzero ndiyo yakanyanya kumira pachena paakatambira iyo National Literature Mubairo gore rapera.
Pamabasa ake anozivikanwa uye anonyanya kukosha, zvinofanirwa kucherechedzwa Ithaca, akapihwa pamwe ne Leopoldo Panero wenhetembo. With Nhoroondo yeatomu akagamuchira iyo National Nhetembo Mubairo muna 2011.
Uye ndiani akamboenda kuIthaca?
Ndiani asingazivi panorama yayo yakaoma,
mhete yegungwa inoitsimbirira,
kushamwaridzana kwakasimba kwainoisa kwatiri,
kunyarara kwakanyanya kunotitevera.
Ithaca inotipfupisa isu sebhuku,
inoperekedza isu kuenda kwatiri,
inotizivisa kurira kwekumirira.
Nekuti kumirira kurira.
inoramba ichitaura manzwi ayo aenda.
Ithaca inotipa mhosva yekurova kwemoyo,
zvinoita kuti tibatsirane nedaro,
varindi mapofu enzira
chii chiri kuitwa tisipo,
izvo zvatisingazokwanise kukanganwa nekuti
hapana kukanganwa kwekusaziva.
Zvinorwadza kumuka rimwe zuva
uye kufungisisa gungwa rinotimbundira,
anotizodza nemunyu uye anotibhabhatidza sevana vatsva.
Tinorangarira mazuva ewaini yakagoverwa
mazwi, kwete maungira;
maoko, kwete kunwisa-pasi chiratidzo.
Ndiri kuona gungwa rakandipoteredza,
iyo bhuruu bhuru yawakarasa iwe kuburikidza nayo,
Ini ndinotarisa kumusoro nekukara kuneta,
Ndinosiya maziso kwechinguva
zadzisa hofisi yake yakanaka;
uye ini ndinonanga nhanho dzangu kuIthaca.
Kuna Pedro García Domínguez
Manyepo akanaka anokuperekedza,
asi haawane kukutsvinyira.
Munongoziva zvavanotaura nezvake
ndeapi mabhuku enigmatic anotsanangudza kwauri
iyo inotaura nyaya inonakidza
nemazwi akazara nerevo,
izere nekujeka chaiko uye uremu,
uye izvo iwe haunzwisise zvakadaro.
Asi kutenda kwako kunokuponesa, kunokuchengetedza.
Nhema dzakanaka dzinokutarisa
Kunyangwe iye asingakuone, uye iwe uchizviziva
Unozviziva nenzira isingatsanangurike
mazviri isu tinoziva izvo zvinotirwadza zvakanyanya.
Inonaya ichibva kumatenga nguva nemumvuri,
kunonaya kusava nemhosva uye kupenga kusuruvara.
Moto wemumvuri unovhenekera iwe,
apo chando chinodzima nyeredzi
ayo aimbova marasha anogara aripo.
kumamiriyoni asingagumi emakore echiedza,
yakasimba uye ine tsitsi, chando chinopararira.
Kuna Maribheri na Ana
Ini chete ndinoda gungwa:
Ndiri kungoda gungwa.
mvura ine tsitsi
kugeza moyo wangu
uye uisiye pamhenderekedzo yegungwa
kusundwa nemafungu ayo,
achinanzva nerurimi rwake rwemunyu
Gungwa, gungwa kuve mubatsiri we.
Gungwa rekuudza zvese.
Gungwa, nditende, ndinoda gungwa,
gungwa rinochema makungwa
uye hapana anozviona.
Kuna Nati naJorge Riechmann
Ndinoyeuka kamwe pandaiva mwana
zvaiita sekunge kwandiri kuti nyika raive gwenga.
Shiri dzakange dzatisiya zvachose:
nyeredzi hadzina musoro,
uye gungwa rakange risisina panzvimbo yaro,
Kunge zvese kwaive kurota zvisirizvo
Ndinozviziva izvozvo kamwechete pandaive mudiki
nyika yaive guva, gomba hombe,
singi rinomedza hupenyu,
fanera iro ramangwana rakatiza naro.
Ichokwadi kuti kamwe, ipapo, muhudiki,
Ndakanzwa zii kunge mhere yejecha.
Mweya, nzizi netemberi dzangu zvainge zvanyarara,
ropa rangu rakamira, sekunge kamwe kamwe,
ndisinganzwisise kuti sei, vangadai vakandidzima.
Uye nyika yakanga yaenda, ini chete ndakasara:
kushamisika kunosuruvarisa sekufa kunosuruvarisa,
kusanzwisisika, kunyorova, kunamira kushamisa.
Uye ruvengo runotyisa, hasha dzekuuraya
kuti, murwere, akasimuka achienda pachifuva,
yakasvika pamazino, ichivaita meno.
Ichokwadi, zvaive kare kare, apo zvese zvakatanga,
apo nyika yakanga iine chimiro chemurume,
uye ndaive nechokwadi chekuti rimwe zuva baba vangu vaizodzoka
uye achiimba pamberi peseka rake
zvikepe zvaizomira zvakamira pachiteshi
uye mwedzi waizobuda nechiso chake chekirimu.
Asi haana kudzoka.
Mifananidzo yake chete ndiyo inosara,
nharaunda dzaro, zvikepe zvaro,
mwenje weMediterranean yaive mumabhurashi ake
uye musikana anomirira pari kure
nemukadzi anoziva kuti vakafa havafi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Francisca Aguirre anofa. Nhetembo ina dzekurangarira kwako